Yini isikhwama sokuhlanza indwangu?
Siyini isikhwama sokuhlanza indwangu? Umsebenzi wesikhwama sokuwasha ukuvikela izingubo, amabrashi nezingubo zangaphansi ekugaxekeni lapho ziwashwa emshinini wokuwasha, gwema ukuguga, futhi zivikele nezingubo ekuguqulweni. Uma izingubo zineziphu zensimbi noma ...
Ungayikhetha kanjani isikhwama se-duffle?
Isikhwama sokuhamba se-duffel ephathekayo senziwa i-polyester nenayiloni, futhi futhi savunyelwa ukuklama ngabo bonke ubujamo nemibala. Eqinisweni, isikhwama se-duffel siba nzima ngokwengeziwe kwabesifazane nakwabesilisa. Isikhwama se-duffel singagcina cishe yonke into efana nezingubo, izicathulo, izinwele nezinwele.
Ukukhangisa Isikhwama Sokuphromotha Sokuthenga-umsizi omuhle wokwaziswa kwezinkampani
Manje izinkampani eziningi zifuna ukuthola ukuthi zingayithuthukisa kanjani ngempumelelo inkampani nemikhiqizo yayo, nokuthi ungazisa kanjani abathengi abaningi ngobukhona benkampani nokuthi inkampani yenzani. Ngokwenhlolovo, amabhizinisi amaningi kanye nezikhungo manje sezikhetha ukusebenzisa iphromoshini yezitolo yokukhangisa ...